मेकअपका सामान किन्दा यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने कुनै क्षण कुरुप बन्नुपर्ने हुनसक्छ ! – rastriyakhabar.com
मेकअपका सामान किन्दा यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने कुनै क्षण कुरुप बन्नुपर्ने हुनसक्छ !
काठमाडौं । आजकल बजारमा छालाको हेरचाह गर्ने धेरै उत्पादनहरू छन् । ति उत्पादनहरुलाई छालाको चकम बढाउन, गोरो र जवान देखाउन लगाउने गरिएको छ ।
तर के तपाईंले कहिल्लै सोच्नु भएको छ कि कम्पनीले हामीलाई बेच्ने गरिरहेको उत्पादन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो छ ? वास्तवमा त्यस्तो उत्पादन हाम्रो छालाका लागि लाभदायक छ वा छैन ? जब छाला हेरचाह उत्पादनहरू छनौट गर्ने बेला आउँछ, हामी इन्टरनेटमा हाम्रो अनुसन्धान शुरू गरेर सजिलै एक उत्पादन छनौट गर्न निर्णय लिन्छौँ ।
तर एकछिन् सावधानी अपनाउनुहोला, सामान्यतया केहि असरदार तत्वहरू त्यस्ता उत्पादनहरूमा फेला परेको छ । जसले तपाईंको छालालाई गम्भीर क्षति पुर्याउँन सक्छ । त्यसैले अर्को पटक तपाईले आँखा बन्द गरेर उत्पादनहरू किन्नु अघि केही कुराहरु ख्याल गर्नुहोला । आज हामी त्यस्ता केही विषयहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
आजकल, कृत्रिम रंग अनुहार क्रीम र सीरम आदि मा धेरै प्रयोग भइरहेको छ । यो राम्रो देखिन्छ तर छाला पोल्न थाल्छ । तिनीहरूले हाम्रो छाला कोषहरूलाई धेरै क्षति पुर्‍याउँछन् जसले गर्दा पोर्स र डन्डीफोरको समस्याहरू पनि बढ्ने गर्छन । त्यसकारण होली लगायत विभिन्न समयमा हुने रंगका कारण केही मान्छेहरुलाई धेरै समस्या भएको देखेको नै छौ । त्यस्ता कुराहरुमा सबैले ख्याल गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
जोसँग छालाको एक्ने प्रवण छ त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि खनिज तेल सबैभन्दा खराब मानिन्छ । यसले पोर्सलाई बन्द गर्दछ र ब्रेकआउट र अन्य छाला पोल्ने लगायत समस्या पैदा गर्दछ ।
छाला विशेषज्ञहरूले सँधै सुगन्ध रहित स्किनकेयर उत्पादनहरू लगाउन सल्लाह दिन्छन् । किनकि यसको सुगन्धले कोलेजेन बिग्रन सक्छ । त्यस्ता उत्पादनहरूले संवेदनशील छालामा पोल्ने समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यस्ता उत्पादनहरुले छालाभित्र क्षति पुर्याउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
पराबेन एक खतरनाक रसायन हो, जुन म्याश्चराइजर, शैम्पू र सीरमहरूमा क्रिम, लोशन र टुथपेस्टदेखि लिएर उत्पादहरूको आयु विस्तार गर्न प्रयोग गरिन्छ । पराबेनले अनुहारमा छिटो झुर्रिया पैदा गर्ने गर्दछ ।
हाइड्रोक्विनोन एक विवादास्पद छाला लाइटर एजेन्ट हो जुन धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । तर यो अझै केहि स्किनकेयर र मेकअप उत्पादनहरूमा प्रयोग भइरहेको छ । जसले यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्दछ त्यसले छाला पोल्नेलगायत समस्या हुन सक्छ ।